Google AdWords vs. SEO: Yintoni ilungile?
Impendulo ixhomekeka kakhulu kwiimeko zoshishino lakho. Ngaphambi kokuba uhlalutye isiphi isiteshi sokuthengisa singcono ukuqhuba ixabiso kunye neendlela zoshishino - SEO okanye i-Google AdWords, makhe siqale siqonde le migaqo. Oku kuya kukunceda ufumane ukuqonda okungcono indlela leyo eya kusebenza ngayo ukuthengisa kwakho.
Yintoni eyehluko phakathi kwe-Google AdWords ne-SEO?
Ukuphuculwa kweenjini zokukhangela yindlela yokwenza izicwangciso kunye namaqhinga asetyenziselwa ukwandisa inani leendwendwe kwisayithi. I-SEO isebenzisa iindlela zobugcisa ezibhekiselele ekugqibeleni i-Google algorithm ukwenzela ukuba isibonelelo somntu sibe nesimo esiphakeme kwi-injini yokusesha. Ezi ndlela ziquka ukusebenzisa amagama abalulekileyo, ukudibanisa isiqulatho kwiiwebhusayithi ezithembekileyo okanye ezinye iindawo ezihlobene kunye nokusebenzisa iinkcazelo ezifanelekileyo ze-meta - rehvivahetus keila.
I-Google AdWords, kwakhona, isebenzisa ukuthengiswa kweentlawulo. Ngale ndlela, abanikazi bewebhusayithi kufuneka bakhokhe injini yosesho (kungakhathaliseki ukuba iGoogle, Yahoo okanye iBing) ukubeka izibonelelo zabo phezulu kwimiphumo ye-Google yokusesha. Kufuneka kwakhona kuqatshelwe ukuba umnini-mhlaba kufuneka akhokhe rhoqo xa umsebenzisi eqhosha kwisibhengezo sakhe.
Masiqhathanise i-Google AdWords ne-SEO
Siza kuqala ngokuthelekiswa kwexabiso. Into ebalulekileyo nge-SEO kukuba inokuqala ukukhululeka kuba akukho mfuneko yokuhlawula ezininzi iinkqubo ezikunceda ngeendlela ze-SEO.Into emele uyenze kukuba ukwazi ukuba yiziphi iindlela ze-SEO ezisebenza kakuhle kwizinto zakho zokusebenza kwaye uzisebenzise.
Nangona kunjalo, ngokukhawuleza xa ishishini lakho likhula, unokufuneka ukhethe iinkonzo ze-SEO, ezifana ne-Semalt, ukuqhubela phambili ukwandisa amaphepha akho ewebhu ukuze uhlale emdlalweni kwaye ubetha ukhuphiswano. Iinkampani ezizodwa kwiindawo ze-SEO kwaye zinokuqonda ukuba sele zisebenza kwimiba efanayo kwiminyaka zinganika ibhizinisi lakho ingqwalasela kunye nemigudu efunekayo.
I-Google AdWords inehlobo lokuqhosha ngomvuzo nganye. Ngalolu cwangciso, lowo uya kuba nebhajethi ethile eya kuhlawula rhoqo xa umsebenzisi echofoza kwisibhengezo. Ngaloo ndlela, abasebenzisi abangakumbi abangayifumana, kufuneka uhlawule ngaphezulu. Nangona kungathi kubonakale kuyindleko kuwe ekuqaleni, akunjalo ukuba uyayithelekisa ukushicilela kunye neemagazini.
Inani lababukeli kunye noLawulo
Xa ukhangela ukubuya kotyalo-mali, kufuneka ukhangele inani elikhokelayo le-Google AdWords kunye ne-SEO.Zombini iindlela zinokunika inani elikhangayo lababukeli. I-AdWords inzuzo, kulo mzekelo, kukuba iyakwazi ukufumana ezininzi iinkqubo ngexesha elifutshane. Nangona kunjalo, ukuba sinamathela kwixesha elide nangona kunjalo, uya kubona ukuba abantu baya kufutshane ngakumbi kwiziphumo zophando lwe-organic. Inkcazo elula yento kukuba ukukhangela kwendalo kubasebenzisi abakufunayo. Ukuyifumanisa, i-AdWords iya kukunika iikhotha okanye ababukeli ngokukhawuleza, kodwa ayizinzileyo njenge-SEO enokukufumana ababukeli abangaphezu kwexesha eliqokelelwayo.
Ngokukhawuleza, i-AdWords iya kuba yinto ekhethekileyo. Kuba i-SEO kuya kuthatha ixesha lokuba abasebenzisi babone iwebhusayithi yakho ngokusebenzisa iziphumo zophando lwe-organic. Kwi-AdWords nangona kunjalo, unokufumana izikhokelo ngokukhawuleza kuba i-Google AdWords inokujolisa ekukhethiweyo kwabantu. I-SEO ayijolisi ekuhlaleni abantu. Yiyiphi i-SEO enokwenzayo ukuqinisekisa ukuba iwebhusayithi yakho ifanelekileyo kwaye abaphulaphuli abafuna ukukufumana baya kuyifumana.
Yintoni endiyikhethayo: i-Google AdWords okanye i-SEO?
Ngoku ukuba uyazi izibonelelo zesebe ngalinye lokuthengisa, kuya kuba lula kuwe ukuba ubone ukuba ngubani obhetele kulo shishini lakho. Ukuba uzama ukuvelisa izikhokelo ngokukhawuleza, ii-AdWords ziza kuba zikhethekileyo. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuba ishishini lakho likhule ngokukhawuleza, kufuneka utyalo ekusebenziseni ubuchule be-SEO. Qaphela, ukuba izitishi zombini zentengiso zinokuba luncedo xa nje ubeka izikhombisi zakho zokusebenza eziphambili kwaye uqhubeke nokulinganisa impumelelo yeseshoni ngasinye sokuthengisa.